Merobichar (मेरो बिचार): May 2011
आमाको ममता बढेर अहिले उर्लन्छ मेरो दिल
तिम्रै पाउमाहाँ परेर अहिले नुग्दैछ मेरो शिर
आमाकै भरले पिएर दुधिलो हुर्कंन्छ त्यो बालक
आमाहुन जननी समस्त भबकी सृस्टि अहो चालक
आमानै नभए अहो ! जगत त्यो सृस्टि त्यसै फुल्छ र ?
मातानै नभए सुबासित भई धर्ती त्यसै खुल्छ र ??
आमाको मन रुन्छ हे मनुजहो बिर्सेर चल्ने गरे
आमाको तनको पिएर रसिलो दुधाम्रीतै त्यो हरे
आमा नै नभए अहो ! चुलबुले बाला त्यसै मर्छनि
को हेर्ला खुसीले अहो ! जगत त्यो हाँसी बढेको अनि
आमालाई हसाउने मन भए सम्मान लौ त्यो गर
बाँचेको छनि आज देश दुनियाँ आमाहरुकै भर
आमाकै रुप हुन् समस्त जगका नारीहरु लौ सब
नारी नै नभए अहो ! जगत त्यो सृस्टि अपुरो अब
तिम्रै काखमाहाँ बढेर अहिले देखें जगत यो पनि
तिम्रै यादमाहाँ म हुँ हर घडी लेखूँ म गाथा अनि
Posted by Ram at 1:17 PM 1 comment: